Ningbo Sine Co. Magnetic, Ltd, kuyinto inkampani professional wahlanganyela Neodymium ozibuthe (NdFeB), Alnico odonsa, Samarium Cobalt ozibuthe (SmCo), odonsa ferrite (odonsa bobumba) nasemhlanganweni kazibuthe e Ningbo, China. Sisabalalisa unqambothi unomphela imikhiqizo kazibuthe.
Thina abe nengqondo bobusha futhi ungalokothi uphonse ithawula umoya, + kwenzeni konke ngokucophelela futhi sina. Sabeka yonke imizamo ku kazibuthe kanye eminyakeni eminingi 'ulwazi nokuhlangenwe nakho. Thina athuthukile okusheshayo futhi kancane kancane kule minyaka eyi-10 futhi ngeke liqhubeke ku.
Ikhwalithi umphefumulo komkhiqizo nokuphila ibhizinisi. Sihlale ukuqeqesha abasebenzi bethu ukuze abenze balukhulume kahle amakhono abo. Thina ngokuqinile ukufeza Quality Management System: ISO9001: 2008, ISO / TS16949: 2009, futhi ISO14001: 2004.Advanced ukukhiqizwa futhi zisetshenziselwe ukuhlola imishini ukuqinisekisa imikhiqizo yethu nge ukungaguquguquki okusezingeni eliphezulu nokuzinza okusezingeni eliphezulu. Iningi imishini yethu eziphambili kukhona baseJalimane Japan, njenge: ICP, soFuba chamber, Laser Particle Analyser njll odonsa yethu kuvumelane nezidingo CE, RoHS, SGS futhi Reach umyalelo.
odonsa zethu ikakhulu ngokwezifiso enjalo ngokuvumelana okufunwa kithi, izidingo kanye nesicelo amakhasimende. A ezihlukahlukene odonsa kungenziwa egcizelele of material ezahlukene, grade, enamathela, ukuma, ubukhulu, magnetization isiqondiso, ubungako besikhathi njll Thina anganikeza odonsa zaba nobukhulu nokuma okuhlukahlukene producible like disc, ukhalise, isikwele, cube, ibha, isilinda, zama-tile, ingxenye , yokuvikela ngocwazi imbulunga namanye amajamo esiyingqayizivele. Ngaphezu kwalokho, sesikubonile ngempumelelo mass ekhiqizwa odonsa unomphela eliphakeme ukusebenza amamaki N54,52M, 50H, 48SH, 45UH, 42EH futhi 38AH.
Siphumelele Imiphumela ezinezithelo nakuba esiyikho esigabeni sokukhula ukuze ezimakethe zomhlaba jikelele. Sesisungule ubudlelwane ibhizinisi obuhle namakhasimende emhlabeni wonke. Sikholelwa ukuthi sizokwazi okusemandleni akho partner ibhizinisi esikhathini esizayo esiseduze. Asikwazanga akunike the best quality imikhiqizo ne amanani ashibhe ukuwedlula futhi inkonzo engcono. Yima njengomuntu mdondoshiya owesabekayo empumalanga, fly ngokukhululekile esibhakabhakeni enkulukazi. Sine bayoqhubeka njalo ukuba umlingani wakho omkhulu nge izinyathelo yayo amazwe isu.
Samukela wena ukuba uxhumane nathi uma unanoma yimiphi imibuzo mayelana inkampani yethu kanye nemikhiqizo. Silwela ulwazi, ukufundisa nokwazisa Ukuhlinzeka imikhiqizo umhlabeleli kanye namasevisi atholakala.
Uma sibheka phambili ekusunguleni ubudlelwane ibhizinisi nenkampani yakho okhetheke khulu.